राजनीतिक अवसानको बाटोमा कमरेड – Nayapath.com
फिस्टेल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न
मदन पुरस्कारका लागि सिफारिस उत्कृष्ट ७ पुस्तक
यसरी छान्नुहोस् कलेज
राजनीतिक अवसानको बाटोमा कमरेड
राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो विधि र पद्धती हो । जब राजनीति व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ तब राजनीतिक कमजोरी र असफलता त्यही बिन्दुबाटै सुरु हुन्छ । कतै हामी त्यही गल्ती दोहो¥याउन त लागिरहेका छैनौँ ।
राजनीति अर्थात् राज्यको नीति सेवामूलक हुने कि अर्थमूखी हुने, नेता जनताले छनोट गर्ने कि वरिष्ठले कनिष्ठको छनोट गर्ने, राजनीति संस्कारयुक्त हुन्छ कि संस्कारविहीन ? यी र यस्ता प्रश्न सामान्य राजनीतिको चासो राख्ने जोसुकैको मगजमा उब्जने प्रश्न हुन् । नेता निर्माण राज्यको आवश्यकता र समाजको चेतना अनुसार हुने गर्छ । नेताको परीक्षाको घडी पनि यस्तै समयमा हुन्छ । कहीँ कतै राजनीतिक चरित्रको बहस पनि पक्कै छन् होला । आजको यो लेख यस हप्ता चर्चामा आएको उपनिर्वाचन र उपनिर्वाचनको आवश्यकतामै केन्द्रित गर्ने प्रयासमा छु।
विषयलाई तोडमोड नगरी सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ भन्ने लाग्यो । यो हप्ता नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ विषयले चर्चा पायो – निर्वाचनमा पराजित बामदेव गौतमलाई काठमाडौँ–७ बाट प्रतिस्पर्धा गराइ सांसद बनाउने । कमरेड बामदेव गौतमप्रति व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन र हुने पनि छैन । तर यो विषय चर्चामा आएसँग मेरो मगजमा सल्बलाएका केही विचार आजको लेखमा समावेश गर्दै छु ।
पहिलो जिज्ञासा– के संसदमा बामदेवको आवश्यकता खड्किएकै हो ? कमरेड बामदेवविना दुई–तिहाइको बहुमत सरकार असफल बन्ने निष्कर्षमा पुगेकै हो? मैले कमरेड बामदेवको राजनीतिक क्रियाशीलताको अवमूल्यन होस् भन्ने पटक्कै चाहेको छैन । तर अर्को प्रश्नसँगसँगै उब्जने गर्छ–एउटा निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराइ निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई स्थापित गराउन खोज्दा त्यसको सन्देश कस्तो जाला? अनि जनमतको अवमूल्यनको प्रश्न?
पक्कै हो, नेकपाको एकतामा कमरेड बामदेवले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय होला । नेकपाले कमरेड बामदेवलाई स्थान दिन खोज्नु स्वभाविक होला तर राजनीतिक चरित्र र संस्कारले त्यसको माग गर्दैन । राजनीतिमा गलत संस्कारको प्रवेशले अराजकता निम्त्याउँछ भन्ने कुरा त इतिहासले देखाइसकेको छ र हामीले भोग्दै पनि आएका छौँ ।
अब अर्को कुरा, कमरेड बामदेव किन सांसदका निम्ति यति बिघ्न मरिहत्ते गर्दै छन्, बुझी नसक्नु छ । अबको उपनिर्वाचन उनको पक्षमा जान्छ नै भन्ने के निश्चित? मत भनेको किन्नु मात्र होइन, जनताको मन जित्नु पनि हो । जबकी जनता नै विपक्षमा उभिने वातावरण तयार भयो भने नेकपाको छवि त गिर्छ नै स्वयम् कमरेडको राजनीतिक साख समेत फेरी कहिल्यै नउकासिने गरी गिर्न पुग्छ । आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बाटो चयन गर्ने दृष्टता त्याग्नु नै अहिले बुद्धिमानी हुनेछ ।
आलोचना,टिप्पणी स्वभाविक रूप नै हुन्छन्। ती कतिपय स्वार्थबाट प्रेरित होलान् त कतिपय पार्टी छवि धमिलो बन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि होला।मुख्य कुरा हामीले निर्माण गर्ने राजनीतिक संस्कार कस्तो हुने भन्ने हो। राजनीतिक संस्कार केबल एउटा पुस्ताको लागि मात्र होइन। यो त भावी पुस्ताले समाउने गोरेटो पनि हो। भावी पुस्तालाई गलत बाटोतर्फ डोर्‍याउने राजनीतिक संस्कार दीर्घकालसम्म सबैका लागि घातक सिद्ध हुनेछ। तसर्थ कमरेड वामदेवले आफ्नो सांसदको मोह त्याग्न सक्नुपर्छ। जसबाट स्वयम् कमरेडको राजनीतिक उचाइ यथावत रहन्छ भने राजनीतिक संस्कार समेत स्थापित बन्न पुग्छ।
Why some kids are more prone to dental decay?
How To Check If Your Facebook Data Has Been Stolen
असार १० गते नेपाल बन्द: हत्याको बदला लिने घोषणा
Data Security Science
Archives Select Month July 2019 (8) June 2019 (16) May 2019 (11) April 2019 (11) March 2019 (14) February 2019 (19) January 2019 (21) December 2018 (22) November 2018 (24) October 2018 (25) September 2018 (44) August 2018 (40) July 2018 (29) June 2018 (37) May 2018 (46) April 2018 (21) March 2018 (40) February 2018 (24)
Categories Select Category Archaeology (1) Arts and Culture (4) Business and Economy (2) Chemistry (4) Cricket (8) Cycling (1) Data Security (5) Education (18) Entertainment (2) Environment and Energy (21) Football (4) Health and Medicine (31) Mathematics (3) Neuroscience (6) Opinion (4) Peace, Politics and Society (4) Science (60) Sports (20) Technology (3) अर्थ/वाणिज्य (16) क्रिकेट (8) खेलकुद (25) घुमफिर (7) नेपाली (3) फुटबल (5) राजनीति (55) राष्ट्रिय (75) विचार (22) विज्ञान र प्रविधि (6) विश्व (34) शिक्षा (61) संस्कृति (5) साहित्य (10) स्वास्थ्य (10)